Tanki အွန်လိုင်း Kristall Hack Tool ကို
Tanki အွန်လိုင်း အလုံးအရင်းနှင့်ထဲမှာ Multiplayer online game တစ်ဦးသည်အလွန်များစွာသောလူများကလူသိများပြီးချစ်. တစ်ခုအံ့သြဖွယ်ထဲမှာ Multiplayer ဂိမ်း. ဒီဂိမ်းကအရမ်းပေါ်ပြူလာဖြစ်ပါတယ်နေဆဲကျွန်တော်ဒီဂိမ်းအတွက် hack ကဖန်တီးခဲ့ကြသည်သော hack ကမတွေ့ရှိသည့်အတိုင်း. သင်ကအလွန်နှစ်သက်တော်ပါလိမ့်မယ်.
Tanki အွန်လိုင်း Hack Tool ကို Kristall သုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်နှင့်အသုံးပြုမှုအနည်းငယ်စက္ကန့်အတွင်း kristalls add ပါလိမ့်မယ်. This hack was made difficult because the game is based on Adobe Flash. ဒီ hack ဖြစ်ပါသည် 100% သိရှိနိုင် ဒါကြောင့်သင်အသုံးပြုနေတဲ့ပြီးနောက်နည်းနည်းလေးပြဿနာရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. ကျနော်တို့အပတ်တိုင်းဒီ hack Update လုပ်ဘူး.
အဆိုပါ Hack Run
သင့်ရဲ့ username နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပါ
သင်လိုချင်တာကိုဘယ်လောက် kristall ကိုရွေးပါ
Kristall Add ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
သင့်ရဲ့ browser ကို Refresh
ငါတို့သည်သင်တို့သောဤသက်သေပြဖို့သောသင်တို့အဘို့ဗီဒီယိုတစ်ခုဖန်တီးခဲ့ကြ hack က tool ကိုကျင့်သောအကျင့်.
john allen ကပြောပါတယ်:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2014 တွင် 9:54 နံနက်